ပြည့်ဖြိုး (နည်းပညာမျှဝေခြင်း): ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကို မယုံကြည်လို့မေးသောမေးခွန်းများကို တိကျသောဖြေရှင်းချက်...
ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကို မယုံကြည်လို့မေးသောမေးခွန်းများကို တိကျသောဖြေရှင်းချက်...
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 12:02 AM
Anonymous July 23, 2012 at 5:04 AM
1. “ဗုဒ္ဓဘာသာ“ ဗုဒ္ဓ ၏ အယူအဆ/အတွေးအခေါ်/မူဝါဒ
လူတိုင်းလူတိုင်း ဘယ်ဘာသာပဲကိုးကွယ်ကိုးကွယ် မကိုးကွယ်မီဖြစ်စေ ကိုးကွယ်ပြီးဖြစ်စေ မိမိကိုးကွယ်မည့်ဘာသာကို လေ့လာရမယ် စမ်းစစ်ရမယ် မေးခွန်းတွေထုပ်ရမယ် လက်ရှိလောကနဲ့ချိန်ထိုးပြီး မိမိကိုယ်ပိုင်ညာဏ်နဲ့ အမှန်အမှား ဆုံးဖြတ်ရမယ်...
“ဗုဒ္ဓဘာသာ“ ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓရဲ့ကိုယ်ရေးသမိုင်းထက် ဗုဒ္ဓရဲ့ အယူအဆ/အတွေးအခေါ်/မူဝါဒ (တရားတော်) တွေကိုအရင်လေ့လာ စမ်းစစ်သင့်တယ်...
(ဥပမာ) မောင်အောင်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်က လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်က (၁၀)တန်းကျောင်းသား ယခု စာမေးပွဲအောင်ပြီး တက္ကသိုလ်ဆက်တက်တော့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဒီလူတစ်ယောက်တည်း ဘာကွာသွားသလဲ...
မောင်အောင် (၁၀)တန်းကျောင်းသားဆိုတာ သူ့ဦးနှောက်ထဲက ပညာအရည်အချင်း အသိညာဏ်ကို သတ်မှတ်ပေးတာ ဆိုတာကို ကွဲကွဲပြားပြားသိကြမှာပါ...
အဲ့ဒီ့နေရာမှာ ဗုဒ္ဓသည် ကိုယ်ခန္ဓာ သေဆုံးပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘုရားလို့ သတ်မှတ်ခံ ညာဏ်တော်တွေ တရားတော်တွေ မသေဆုံးသေးပါဘူး... သာသနာမကွယ်ပျောက်သေးပါဘူး.....
ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓ ၏ အယူအဆ/အတွေးအခေါ်/မူဝါဒ (တရားတော်) တွေကို အမှန်အမှား လေ့လာစမ်းစစ်သင့်ပြီနော်... ဒါမှ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် ယုံကြည်မှု၊ သက်ဝင်မှု နဲ့ တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်လာမှာပါ......
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓ ၏ အယူအဆ/အတွေးအခေါ်/မူဝါဒ (တရားတော်) တွေကို လက်ခံသော နာယူသော လက်ကိုင်သုံးဆွဲသောလို့ နားလည်ရပါမယ်...
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ဘာလဲ သိချင်ရင်တော့.........
ဗုဒ္ဓ ဘာတရားတွေဟောခဲ့လည်း အယူအဆ/အတွေးအခေါ်/မူဝါဒ တွေကဘာလဲဆိုတာ လေ့လာလိုက်ပါ.......
if somebody want to read more, you can read that book.
“ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီး ၏ “တက္ကသိုလ်ဓမ္မသဘင်”
ပိဋကတ်(၃) ပုံ မြန်မာဘာသာပြန်
Jet Clean 1.3.0
Real Desktop 1.79
Cursor အလန်းလေးတွေယူဖို့အတွက် Cursor FX Control Pa...
Zemana AntiLogger 1.9.3.200 + Keygen
Internet Download Manager Build 6.12 Beta-7
Window Admin Password ကို USB နှင့် ကျော်ဝင်နည်း
Super Hide IP.3.2.2.2
ဘောလုံးဝါသနာရှင်များအတွက် PES 2012 Game Highly Com...
Wifi ပြန်လွင့်ပေးနိင်ရန်အတွက် Connectify Pro v3.5....
Learning Guide For 3D Studio Max (မြန်မာဘာသာပြန်)
3D Wallpapers Pack Highly Compressed (6.8MB)
Uniblue Driver Scanner 2013 v4.0.9.10
Post Title ရှေ့မှာပုံလေးတွေထားချင်ရင်
Job Vacancy 29 .7. 2012 5:00PM နောက်ဆုံးထားလျှော...
Chrome v18.0 For Android Phone
VLC Media Player 2.1.0 Latest Version
အင်တာနက်သုံးလိပ်စာများ (မြန်မာဘာသာပြန် Ebook)
Call of Duty4Highly Compress (95.63MB)
Tango Free Video Phone Call (PC&Laptop , iphone ,...
Adobe Dreamweaver CS6 + KeyMaker
Window XP / Vista /7တို့ကို Window 8 စတိုင်လေြးေ...
Window7Home Premium (9.3MB)
Learning AutoCAD 2010 (မြန်မာဘာပြန်)
God of war2(ဇာတ်လမ်းတွဲ ဖိုင်တင်ဂိမ်း)
Ashampoo Virus QuickScan v1.0.1 Portable
Gamer များအတွက် Speed Gear v7.2 With Crack
PDF Converter Pro v12.0
Android Phone များအတွက် Moborobo Setup V2.0.3.336...
တရားစာအုပ်များ အပိုင်း (1)
Offline Font Converter Portable
Face Smoother v 2.51
Microsoft Office Enterprise 2007 With Serial (5.8...
Windows 8 Xtreme Edition. x86
Internet Download Manager 6.12 Build2Final (1 Cl...
Aurora 3D Text Logo Maker v11.5.3.0
Google Chrome 20.0.1132.47 Stable (Latest Version)...
Laptop Service Guide မြန်မာဘာသာပြန် (Ebook)
Security Software ကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပေးနိုင်သော SS ...
Advanced System Care with Antivirus 2013 v 5.5.3.2...